बागलुङ क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेको पुन:निर्माण अभियान | MYAGDINEPAL
Home / समाचार / बागलुङ क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेको पुन:निर्माण अभियान
बागलुङ क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेको पुन:निर्माण अभियान
बागलुङ, जेठ २५ । नेकपा एमालेको राष्ट्रिय पुन:निर्माण अभियान अन्तर्गत भुकम्प प्रभावित संरचना निर्माणको काम बागलुङ क्षेत्र नं. ३ मा पनि सुरु भएको छ । गत बैसाख १२ र २९ गतको भुकम्पका कारण घर भत्किएर पालमा बस्दै आएका रिघा वडा नं. ९ का नेत्रबहादुर कुमालको घर आइतवार देखि पुन:निर्माण सुरु गर्दै अभियानको सुरु गरिएको हो ।
क्षेत्र नं. ३ का माथिल्लो भेगमा २० जना तथा तल्लो भेगमा २० जना स्वयंसेवक तथा पून:निर्माण व्यावस्थापन समितिका १३ जना गरि कुल ५३ जनाको टोलीले पुन:निर्माण अभियान सुरु गरेको हो । टोलीले रिघा, ग्वालीचौर तथा रणसिंह किटेनीमा एकै साथ पुर्ननिर्माण अभियान सुरु गरेको ज
नाएको छ ।
रिघामा पुन:निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रेम खरेलको नेतृत्वमा रहेको टोलीले काम सुरु गरेको हो । टोलीले भत्किएका विभिन्न घरहरुको पुन:निर्माण कामलाई अगाडि बढाइएको पून:निर्माण व्यवस्थापन समितिका विष्णु भुसालले जानकारी दिनुभएको छ । टोलीले स्वयंसेवी रुपमा काम गर्ने र पिडितको लागि अस्थायी घर समेत निर्माण गरिदिने नेकपा एमाले क्षेत्र नं. ३ ले जनाएको छ । शनिवार नेकपा एमाले बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी केसीको आतिथ्यतामा खर्वाङमा पुन:निर्माण समिति गठन गरिएको थियो ।